Ubuninzi beNtsholongwane yePix Pox China Manufacturer
Ukugonywa kweeMveliso zeMpilo,Igciwane eliphezulu leMpilo,Iimveliso zeeMveliso eziMgangatho oPhezulu
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Ukugonywa kweeMveliso zeMpilo,Igciwane eliphezulu leMpilo,Iimveliso zeeMveliso eziMgangatho oPhezulu
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Bulk Final > Ubuninzi beNtsholongwane yePix Pox
 Ubuninzi beNtsholongwane yePix Pox
Ukuba ucinga ukuba yinto enzima yokuphendula okanye enye imeko engxamisekileyo enokuyilinda, fowuna i-9-1-1 uze ufike esibhedlele esiseduze. Ngaphandle koko, biza umnonophelo wakho wezempilo.
Emva koko, iimpendulo kufuneka zichazwe kwiNkqubo yeNgxelo yokuLungisa iSigxina (VERSA).
I-VAERS ayinikezeli iingcebiso zonyango.
I-Chickenpox isifo esibangelwa sisifo se-varicella-zoster (VZV). Kubangela ukugqithisa okufana ne-blister, ukukhenkceza, ukhathala kunye nomkhuhlane. I-Chickenpox yayisetyenziswa kakhulu kwi-United States. Unyaka ngamnye, inkukhu yabangela iziganeko ezi-4 yezigidi, malunga nezi-10,600 zezibhedlele kunye nokufa kwabangu-100 ukuya kwe-150.
Uluhlu lweMveliso ezinxulumene noko: Ukugonywa kweeMveliso zeMpilo , Igciwane eliphezulu leMpilo , Iimveliso zeeMveliso eziMgangatho oPhezulu , Ukugonywa kweMpilo yeMpilo , Ukugonywa kwezeMpilo , Ukugonywa kweeVioproducts zeMpilo , Ukugonywa kweeMveliso Iinkonzo eziNyango , Ukugonywa kweeMveliso eziCwangcisiweyo